संखुवासभामा ६ जनाको हत्या आरोपितलाई प्रहरीले गर्यो सार्वजनिक « NagarikTimes : National News Portal From Kathmandu
संखुवासभामा ६ जनाको हत्या आरोपितलाई प्रहरीले गर्यो सार्वजनिक
प्रदेश नं १ अन्तर्गत रहेको संखुवासभामा ६ जनाको हत्या गरेको आरोपितलाई प्रहरीले आज सार्वजनिक गरेको छ ।
मादी नगरपालिका वडा नम्बर १ उम्लिङमा तेजबहादुर कार्कीसहित उनको परिवारका ६ जनाको हत्या गरेको आरोपमा उनकै भतिज नाता पर्ने लोकबहादुर कार्कीलाई पक्राउ गरी आइतबार चैनपुरमा पत्रकार सम्मलेन गरी प्रहरीले सार्वजनिक गरेको हो ।
उनी हत्या गरिएका ५७ वर्षीय तेजबहादुर कार्कीका बढाबाका नाति थिए, नातामा भतिजा। लोकबहादुर घरका जेठा छोरा थिए। आमा गत चैतमा बितेकी थिइन्।उनी हत्या अनुसन्धानमा प्रहरी खटिएका बखत त्यतै देखिन्थे, पत्रकार तथा स्थानीयसँग घटनाबारे कुराकानी पनि गर्थे।
झट्ट हेर्दा ‘सामान्य’ लाग्ने उनले कसरी यतिधेरै मानिसको हत्या गर्लान्? सुरूमा त प्रहरी नै अन्योलमा थियो।प्रहरीले मृतक परिवारसँग कसैको केही ‘रिसराग’ थियो कि भनेर खोजी गर्‍यो, तर केही पनि फेला पार्न सकेन।
उनले हत्या स्वीकार गरिसकेको हुँदा नियन्त्रणमा लिएर राखिएको छ।अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरीका अनुसार सोमबार उज्यालो भइसकेको थियो, साढे ५ देखि ६ बजेको समय। यकिन गरिनसकिएको यो समयमा लोकबहादुर आँगनमा निस्केका थिए।
तेजबहादुर खेताला खोज्न भन्दै घरबाट निस्केका थिए। तेजबहादुर र लोकबहादुरको घर डेढ सय मिटरमा दुरीमा पर्छ।तेजबहादुरलाई देख्नेवित्तिकै ‘झोंक’ चलेको लोकबहादुरले प्रहरीलाई बताएका छन्।
यसरी प्रहार गर्दा तेजबहादुर ढलेपछि उनकी श्रीमती कराउँदै आएकी थिइन्।ए यो लोकेले मार्‍यो भन्दै आउँदा उनलाई पनि हिर्काएको बताएका छन्,’ वडाध्यक्ष खेमनाथ कटुवालले भने।
प्रहरीले लोकबहादुरसँग बयान लिँदा कटुवाल आफू सँगै रहेको बताउँछन्।सासु ढलेको देखेपछि बुहारी अगाडि बढ्दा उनलाई पनि हिर्काएको लोकबहादुरले बताएका छन्।
त्यसपछि उनले घरै पुगेर कुँडो पकाउन आगो फुकिरहेकी ८४ वर्षीया आमा पार्वतालाई हिर्काएका थिए।कुँडो पकाएको ठाउँमै पार्वताको शव फेला परेको थियो। पार्वतालाई न्याकेर पहिले उनको टाउको भित्तामा दुई पटक ठोक्काएको र त्यसपछि दाउराले हिर्काएको लोकबहादुरले बताएका छन्।
आफूलाई ‘होच्याएर’ बोल्ने गरेकाले तेजबहादुरसँग ‘रिस’ उठेको लोकबहादुरले बताएको कटुवालले जनाए।घटना ‘आवेग’मा भएको देखिए पनि यसबाहेक अन्य कारण के थिए भन्ने प्रहरीले बताउन मानेको छैन।
लोकबहादुर र तेजबहादुरको घरबीच पारिवारिक ‘दुश्मनी’ अरू के थियो प्रहरीले बताइसकेको छैन। वडाध्यक्ष कटुवालले अरु केही नदेखिएको बताए।प्रहरीले आर्थिक लेनदेनलगायतको पाटोबाट अनुसन्धान गर्दा त्यस्तो फेला नपरेको बताएको छ।
तेजबहादुरका बुवा ९० वर्षीय वृद्ध बौद्धमान कार्की भने जीवित नै भेटिएका थिए। श्रीमतीसहित परिवारका सबै मारिँदा पनि उनले थाहा नपाएको प्रहरीले बताएको छ। बौद्धमानको दृष्टि र श्रव्य शक्ति कमजोर छ।सेतोपाटी
कपनमा हस्तकलाका सामान उद्योगबाट चरेसहित ९ जना पक्राउ !
काठमाडौंको कपनस्थित हस्तकलाका सामान उद्योगबाट प्रहरीले ७ किलो ६२४ ग्राम चरेसहित ९ जनालाई प्रहरीले पक्राउ
माओवादी केन्द्रले वडादेखि केन्द्रसम्मै निर्वाचनमार्फत नेतृत्व चयन गर्ने
नेकपा माओवादी केन्द्रले वडादेखि केन्द्रीय समितिसम्म सबै तहका नेतृत्व निर्वाचनमार्फत आउनुपर्ने गरी कार्यविधि बनाएको भएको
नेकपा एमालेका सांसद गोकुल बास्कोटाले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई एमालेका १४ सांसदलाई कारबाही गर्न नमिल्ने भनेर